Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်)
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) ကဘာလဲ။
နှလုံးအကျိတ်ဆိုတာ နှလုံးနဲ့ နှလုံးအဆို့တွေမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကြီးထွားမှုကို ခေါ်ပါတယ်။ နှလုံးအကျိတ်ပုံစံ
မျိ ုးစုံရှိပါတယ်။ ယေဘုယျပြောရရင်တော့ နှလုံးအကျိတ်များက ရှားပါတယ်။
အကျိတ်များက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တာနဲ့ မဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ အကျိတ်များက နှလုံးမှာကြီးထွားမှုဖြစ်နေပြီး နှလုံး
အကျိတ်များက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့တစ်ခြားနေရာမှဖြစ်ပြီး နှလုံးကိုရွှေ့လာရင် (ပြန့်လာရင်) ဒုတိယဖြစ်သော အကျိတ်များလို့ခေါ်ပါတယ်။
အကျိတ်များသာဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း သာမန်အကျိတ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ နေရာ
ပေါ်မူတည်ပြီး ပြသနာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အကျိတ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်စလောက်က သွေးစီးကြောင်းထဲပြ ုတ်ကျပြီး သွေးကြောတွေထဲကိုဝင်ပြီး
တစ်ခြားကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲကို ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီး embolism လို့ခေါ်တဲ့သွေးခဲပိတ်ခြင်း
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အရမ်းကိုအတွေ့ရများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက်ပိုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းနဲ့စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လူနာတွေဟာ သူတို့မှာ နှလုံးအကျိတ်ရှိတာကိုမသိရှိကြပါ
ဘူး။ သူတို့တွေဟာ တစ်ခြားအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်နှလုံး စက်ဆွဲကြည့်တာတွေ လုပ်ကြည့်တော့မှ တွေ့ကြပါတယ်။
တကယ်လို့ အကျိတ်ဟာ ကယ်လ်စီယမ်အနည်ကျပြီး မာနေပြီးဆိုရင်တော့ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ သိ
လူနာတွေရဲ့ အသက် ၅၀နဲ့၆၀လောက်မှာ ရှာတွေ့တတ်ကြပါ
တယ်။ သို့သော်လည်း ငယ်ရွယ်တဲ့လူနာတွေမှာလည်းတွေ့
နှလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ကြော အခန်းတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့ နှလုံး myxoma ဆိုတာကလည်း ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့
ရပါတယ်။ နှလုံးအဆို့မှာ သွေးစီးဆင်းမှုပိတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုပိတ်ခြင်းဟာ တစ်ချိန်လုံးပိတ်နေတာဖြစ်နိုင်သလို လူနာရဲ့ နေထိုင်မှုပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ် (ဥပမာ လှဲအိပ်ခြင်း)။
လူနာတောတော်များများမှာ ရောဂါလက္ခဏာ မရှိတတ်ပေ
မယ့် သွေးစီးဆင်းမှုပိတ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်
ကြောအခန်းထဲမှာ ဖိအားများလာပါတယ် ၎င်းကနေမှ
မောခြင်း၊မူးမေ့ခြင်းသလိုဖြစ်ခြင်း နဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းကနေပြီးမှ ဖျားနာခြင်း နဲ့ လူနာက အဆစ်တွေနာခြင်း နေထိုင်မကောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နှလုံးအကျိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ လူနာ တွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်
ကတော့ မျိ ုးရိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ
တော့ NAME Syndrome, LAMB Syndrome, Carney Syndrome လို့ခေ ါ်တဲ့ တစ်ခြားကျန်းမာရေးပြသနာတွေရဲ့
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေ မျိ ုးရိုးလိုက်တာတွေမရှိပဲနဲ့လည်း နှလုံးအကျိတ်ဟာ ဖြစ်နေတတ်တာတွေရှိပါတယ်။ နှလုံးမှာ
ဆဲလ်ကြီးထွားမှုတွေရဲ့ ရလာဒ်အနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် နှလုံးကို ဆဲလ်ကြီးထွားမှု နေရာရွေ့တာကြောင့် နှလုံးအကျိတ်ဖြစ်ရပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နှလုံးအကျိတ်ဟာ မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ရင် ဖြစ်တတ်သလို မျိ ုးရိုးဗီဇအရလည်း လိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့
တစ်ခြားအစိတ်အပိုင်းမှာ ဆိုးရွားတဲ့အကျိတ်မျိ ုးတွေရှိနေရင်
နှလုံးကို ပြန့်နိုင်ပါတယ် အထူးသဖြင့် melanoma၊ ရင်သား
ကင်ဆာ နဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့က
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တကယ်လို့သင့်ဆရာဝန်က သင့်မှာ နှလုံးအကျိတ်ရှိနေတယ်ထင်ပါက နှလုံးစက်ရိုက်ကြည့်ခြင်း၊
CT,MRI ,Radionuclide ဓါတ်မှန်မျိုးတွေရိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့
အတည်ပြုရောဂါရှာဖွေပေးပါလိမ့်မယ်။
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နှလုံးအကျိတ်တွေဟာ သွေးစီးဆင်းမှုမှာ ပြသနာတွေအများ
တော့ ခွဲစိတ်ပြီးတော့ အကျိတ်ကို ဖယ်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခွဲစိတ်မှုဟာ နှလုံးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်မယ်၊ ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအပေါ်ရယ် နဲ့ လူနာရဲ့ ကျန်း
မာရေး အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲဖို့လိုမလို ကြည့်ရပါတယ်။
နည်းလိုအပ်ပါမယ်။ သို့သော် အခြေအနေတော်တော်များများ
မှာတော့ ရိုဘော့နဲ့ ခွဲတာ ဒါမှမဟုတ် သိပ်ပြီး ခွဲစိတ်တာမလုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးပြီး ခွဲစိတ်ကြပါတယ်။ ခွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က အကျိတ်ရယ် အကျိတ်နားက တစ်ရှူးတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်
ခြင်းနဲ့ အကျိတ်နောက်တစ်ခါ မဖြစ်လာအောင် လုပ်ရပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြင် ခွဲနေစဉ်အတွင်းမှာ နှလုံးနဲ့အဆုတ် အလုပ်လုပ်နေအောင် နှလုံး-အဆုတ် စက် တစ်ခုကို အစားထိုးသုံးပြီး ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးခွဲစိတ်မှုတစ်ခု ပြီးရင်တော့ဆေးရုံမှာဆိုရင့် ၄ရက် ၅ရက်လောက်မှာနာလန်ထပါတယ် အပြည့်အစုံ နာလန်ထ
နိုင်ဖို့ကတော့ ၆ပတ်လောက်ကြာပါတယ်။ တကယ်လို့ အကျိတ်ကို ရိုဘော့ နည်းပညာ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းခွဲစိတ်မှုမလုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပါက သင်ဆေးရုံမှာ နေဖို့အချိန်က တိုပါလိမ့်မယ် ပြီးတော့ အပြည့်
အစုံ နာလန်ထနိုင်ဖို့ကလည်း ၂ပတ်မှ ၃ပတ်သာ ကြာနိုင်ပါ
တယ်။ ခွဲစိတ်မှုပြီးသွားရင်တော့ သင်က နှစ်စဉ် နှလုံးဓါတ်မှန်
ရိုက်ပြီး အကျိတ်ပြန်ဖြစ်လာသလား ဒါမှမဟုတ် အသစ်တစ်ခုခု ဖြစ်လာသလား ဆိုတာ သိရဖို့ အမြဲစစ်နေရ
နှလုံးအကျိတ် အတွက် ကူညီနိုင်မယ့် လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကဘာတွေလဲ။
အောက်မှာပြောပြတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကတော့ နှလုံးအကျိတ်ဖြစ်ခြင်း အတွက် သက်သာရာရစေမယ့် နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
-ကင်ဆာလူနာတွေမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ လူ့ဘောင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူနာက သီးခြားဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရရင် လူနာက စိတ်ဓါတ်ကျနိုင်ပြီး ဆေးကုသမှုကို ကောင်းမွန်စွာ မတုံ့ပြန်နိုင်တာတွေ့လာရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းမျိ ုးတွေဟာ ကျန်းမာရေးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုတိုးလာစေပြီးတော့ ကင်ဆာရောဂါပျောက်ကင်းဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ
လျော့လာစေပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အုပ်စုလေးတွေထဲမှာ ကင်ဆာသမားတွေကို အချင်းချင်းစုပေးပြီး သူတို့ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွဖို့ ကျန်းမာဖို့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ပေးခြင်း
-မိသားစုရဲ့ ကူညီအားပေးမှုကလည်း ကင်ဆာလူနာတွေကို
ကုသရာမှာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံမှန် ဆေးသောက်ခြင်း ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကလည်း အရမ်း
အရေးကြီးပါတယ်။ လူနာရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေမှာ လိုက်ပါပေးခြင်း ပြန်ချိန်းတဲ့ရက်တွေမှာ လူနာနဲ့အတူတကွလိုက်ပါ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လူနာရှင်တွေကပဲ စားသောက်နေထိုင်ပုံတွေရယ် လိုအပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ လူနာတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
-ကင်ဆာသမားတွေအတွက် သက်သာစေမယ့်ဂရုစိုက်မှုပေးခြင်းကလည်း အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ ကင်ဆာလူနာတွေမှာ ခံစားရ
တဲ့ ခံစားမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကအချက်ပါပဲ။
ကင်ဆာအကျိတ်များကို လုံးဝပျောက်သွားအောင် ကုနိုင်တာမကုနိုင်တာထက် ဒီသက်သာအောင်လုပ်ပေးတဲ့
နည်းလမ်းက ကင်ဆာရောဂါရဲ့ဘယ်အဆင့်မှာမဆို သင့်လျော်ပါတယ်။
1. Cardiac Tumors. http://my.clevelandclinic.org/services/heart/disorders/cardiac-tumors. Accessed 12 Dec, 2016
2. Cancer Support. http://www.cancer8.com/cancer-support.html. Accessed 12 Dec 2016